GOS-P1: Sahaminta isha ballaaran ee furan ee Google - Qeybta 1 | Laga soo bilaabo Linux
Maqaal hore waxaan kaga faalloonay muhiimadda iyo ciriiriga badan ee Il furan, taas oo maalinba maalinta ka dambeysa sii fideysa maahan oo keliya inta u dhexeysa dadka iyo bulshada (kooxaha) laakiin u dhexeeya ururada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Iyo dhexdeeda, waxaan si gaar ah ugu xusnay 5 Tiknoolojiyad Casri ah ka tirsan kooxda loo yaqaan GAFAM. Kuwaas oo mid waliba leeyahay keyd u gaar ah oo bulshada u gaar ah oo loogu talagalay software-ka Il furan. Sidaa darteed, tan gaarsiinta ugu horeysa Waxaan bilaabi doonaa dib u eegis yar oo ku saabsan qaar ka mid ah codsiyada ku dhex jira, anagoo ka bilaabayna Isha Furan ee Google.
Kuwa daneynaya sahaminta qoraal hore oo la xiriira mowduuca, waxaad gujin kartaa xiriirka soo socda, ka dib markaad dhameyso akhriska daabacaddan:
"Maanta, ururada dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba waxay si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqayaan isdhexgal ballaaran oo Software-ka Bilaashka ah iyo Ilaha Furan ee moodooyinka meheradooda, barnaamijyadooda, badeecooyinkooda iyo adeegyadooda. Si kale haddii loo dhigo, tiknoolajiyada bilaashka ah iyo kuwa furan waxay sii kordhayaan qayb muhiim ah oo ka mid ah habka looga shaqeynayo ama looga baxayo iyaga, si ay uga faa'iideystaan ​​milkiilayaashooda, macaamiishooda ama muwaadiniintooda." GAFAM Isha Furan: Rafaayada Teknolojiyada ee doorbida Isha Furan
1 GOS-P1: Isha Furan ee Google - Qeybta 1
1.1 Codsiyada Source Google Open
1.1.5 Beerta Apache
GOS-P1: Isha Furan ee Google - Qeybta 1
Codsiyada Isha Furan ee Google
Abseil waa ururinta koodhka maktabada furan ee furan. Abseil's C ++ nambarkiisa waxaa loogu talagalay inuu ku kordhiyo maktabadda C ++ ee caadiga ah. Xaaladaha qaarkood, Abseil wuxuu bixiyaa qaybo ka maqan heerka C ++; kuwa kale, Abseil waxay bixisaa waxyaabo kale oo ka duwan heerka. Abseil ma sheeganayso inuu la tartamayo nambarka maktabadda ee caadiga ah. inbadan ka arag: Isha Furan ee Google, GitHub y Web rasmi ah.
AdaNet waa AutoML dhakhso ah oo dabacsan oo leh dammaanad qaad waxbarasho. Si kale haddii loo dhigo, waa qaab-dhismeed ku saleysan TensorFlow miisaan fudud oo tayo sare leh barashada mashiinka oo leh faragelin khabiir yar. Waxay adeegsataa algorithm-ka AdaNet ee ka socda «Cortes et al. 2017 »si loo barto qaabdhismeedka shabakad neerfaha ah oo loo yaqaan 'subnets' iyadoo la siinayo dammaanad qaadasho waxbarasho. Muhiimad ahaan, AdaNet waxay bixisaa qaab guud oo aan ahayn oo keliya barashada qaab dhismeedka shabakadda neerfaha, laakiin sidoo kale barashada sida loo isugu yimaado xitaa moodooyinka wanaagsan. inbadan ka arag: Isha Furan ee Google, GitHub y Xiriir rasmi ah.
Android waa Nidaam Hawlgal iyo barnaamij software ah oo loo sameeyay dhowr qalab oo leh arrimo noocyo kala duwan ah, sida taleefannada, kiniiniyada, dharka la gashado (wearables), telefishanka, gawaarida iyo aaladaha ku xiran. Hadafyada asaasiga ah ee Android waa in la abuuro barxad furan oo loo heli karo wadayaasha, OEMs iyo horumariyayaashu si ay fikraddooda ugu keenaan nolosha isla markaana u keenaan badeecad adduunka guul ka gaadhay oo kor u qaadaysa waayo-aragnimada moobiilka ee isticmaalayaasha. inbadan ka arag: Isha Furan ee Google, Source from Google y Xiriir rasmi ah.
Angular waa qaab codsi shabakadeed oo loogu talagalay moobilka, desktop-ka iyo aaladaha webka. Sidaa awgeed, waa barxad horumarineed oo ujeedadeedu tahay in laga dhigo horumarka webka inuu dareemo dadaal la'aan, oo diiradda lagu saarayo wax soo saaraha horumariyaha, xawaaraha, iyo tijaabada. Codsiyada lagu dhisay 'Angular' waxaa lagu geyn karaa desktop-ka iyo aaladaha mobilada sida degellada internetka iyo codsiyada. inbadan ka arag: Isha Furan ee Google, GitHub y Web rasmi ah.
Apache Beam waa moodel mideysan oo qeexaya iyo socodsiinta dhuumaha ka shaqeynaya xogta. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku siinaysaa qaab barnaamij midaysan oo horumarsan, kaasoo kuu oggolaanaya inaad hirgeliso shaqooyinka qulqulka qulqulka iyo duubista ee ku socon kara wakhti kasta oo soconaya. Way fududahay in loo isticmaalo Apache Apex, Apache Flink, Apache Spark, iyo Google Cloud Dataflow, oo ka mid ah dib-u-soo-celinta wax-soo-saarka qaybsan. Apache Beam waxaa laga soo saaray dhowr tiknoolojiyad gudaha ah oo Google ah, sida MapReduce, FlumeJava, iyo Millwheel. Google ayaa ugu deeqday sumcadda barnaamijka 'Apache Software Foundation' sanadkii 2016, dadka Google-ka waxay sii wadaan inay si joogto ah wax ugu biiriyaan mashruuca. inbadan ka arag: Isha Furan ee Google, GitHub y Web rasmi ah.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan sahamintan koowaad ee «Google Open Source», waxay bixisaa barnaamijyo xiiso leh oo kaladuwan oo barnaamijyo furan ah oo ay soo saartay Giant Teknolojiyada ee «Google»; waana mid dan iyo faa iido weyn u leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GOS-P1: Sahaminta isha ballaaran ee furan ee Google - Qeybta 1
Luqadda miridhku: Kuwa horumariya waxay ku dhawaaqaan nooca cusub 1.50.0